SEMP, Urban Master Planning နှင့် NYDC ၏ တိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ – NYDC
ရန်ကုန်မြို့သစ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ NYDC ရဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အများသိရအောင် ပြောပြပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အပတ်စဉ်စာစဉ်တွေ မထုတ်ဖြစ်တာ နည်းနည်းကြာသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါကကျွန်တော်တို့ ဘာမှလုပ်မနေဘဲ လုပ်ငန်းတွေရပ်နေတဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူး။ သြဂုတ်လဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အင်မတန်အလုပ်များခဲ့တဲ့လ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စာရွက်စာတမ်း ပေါင်းများစွာကို ဖတ်ရှုခဲ့ရပြီး ညှိနှိုင်းမှုပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးမှုပေါင်းများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ကို ကျွန်တော်ပြောပြရရင်-
ရည်မှန်းချက် (၂)ခုနဲ့ SEMP
မြို့သစ်စီမံကိန်းရဲ့ နောင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးအတွက် လူမှု-စီးပွားပင်မစီမံချက် (SEMP) ဟာ လမ်းညွှန်ချက်အနေနဲ့ ရပ်တည်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာ ဒီအစီရင်ခံစာ ထွက်ရှိလာနိုင်ရေးအတွက် အထူးအားထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ SEMP ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ NYDC website ဖြစ်တဲ့ www.nydc.com.mmမှာသွားရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လူမှု-စီးပွား ပင်မစီမံချက်(SEMP) မှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာကို အတိုချုံးပြောရရင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ နေပျော်ဖွယ်ကောင်းရေးဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုကို ဦးတည်ထားပြီး အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအနှီး ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့ရေးနှင့် မြို့ပြတည်ဆောက်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲရေး မဟာဗျူဟာ အစရှိတဲ့ ကဏ္ဍ(၁၃)ခုကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
လူမှု-စီးပွားပင်မစီမံချက် ထွက်ရှိလာမှုနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ Roundtable ဆွေးနွေးပွဲတွေကို ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်း (AMA)၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်း (MES)၊ မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ (MEC) နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာကောင်စီ (MAC) အစရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များနှင့် အသင်းဝင်များကို ဖိတ်ကြားပြီး နည်းပညာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Technical Roundtable) ကို ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Technical Roundtable အပြီးမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ အလှူရှင်များ၊ NGOများ၊ အလားအလာရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ အခြားအကျိုးသက်ဆိုင်သူများကို ဖိတ်ကြားပြီး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီလမှာ စတင်မယ့် Urban Master Plan ရေးဆွဲဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ထင်မြင်ချက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များနဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေကို စုစည်းပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆွေးနွေးပွဲများကိုလည်း လူမှုကွန်ရက်မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီး အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လအတွင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်အတွက် Urban Master Plan ရေးဆွဲဖို့ Expression of Interest (EOI) ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၄) ခုမှ EOI ကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံအပေါ် မူတည်ပြီး ဆန်ခါတင် (၆) ဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများကတော့ –
၁. AECOM Singapore
၂. Broadway Malyan, Meinhardt (Myanmar) Ltd & RLB
၃. Surbana Jurong Consultants Pte Ltd. & Surbana International Consultants (Myanmar) Co., Ltd.
၄. Nippon Koei Co. Ltd.
၅. RSP Architects Planners & Engineers Pte Ltd.
၆. SOM Asia Ltd. တို့ဖြစ်ပါတယ်။
တိကျခိုင်မာသော အကဲဖြတ်မှုများအဆင့်ဆင့် လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Urban Master Plan ရေးဆွဲခွင့်ကို AECOM Singapore မှ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ urban master planning and design ရေးဆွဲခြင်းကို အခုစတင်တော့မှာဖြစ်ပြီး လာမယ့် (၂)လ အတွင်းမှာ ပထမအဆင့် ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ NYDC ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှု အချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြုံငုံပြောရရင် ကောင်းမွန်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ နောက်လာမယ့် အပတ်စဉ်စာစဉ်တွေမှာ ဆက်လက်ပြီး အသေးစိတ် ဆွေးနွေးမျှဝေ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။